Itoophiyaan Waancaa Addunyaa bara 2022'f darbuu dandeessii? - BBC News Afaan Oromoo
Itoophiyaan Waancaa Addunyaa bara 2022'f darbuu dandeessii?
Gareen Kubbaa miilaa biyyaalessaa Itoophiyaa Waancaa Addunyaa bara 2022 Qaataaritti gaggeeffamuuf jiruuf biyyoota waliin taphattu barteetti.
Haaluma kanaan Garee 7ffaa keessatti Gaanaa, Afrikaa Kibbaafi Zimbaabuwee waliin ramadamteetti.
Garee biyyoota waliin taphatanii kana ramaduun kan gaggeeffame magaalaa guddoo Masirii Kaayirootti kan gaggeeffame yoo ta'u biyyoonni garee isaanii keessaa mo'atan ammoo carraa baasuudhaan deebiyanii walii isaanii wajjin akka taphatan taasifamu.
Biyyoonni taphoota dhaqaa galaa mo'atanii darban 5 Waancaa Addunyaa Qaataar bara 2022 irratti Afrikaa bakka bu'anii taphatu jechuudha.
Gareen kubbaa miilaa Itoophiyaa maqaa Waaliyaa jedhamaniin beekaman Fulbaana darbe Istaadiyeemii Baahir Daaritti garee biyyaalessaa Lesoottoo waliin taphachuun goolii osoo hin lakkoofsisiin walqixa ta'uun xumuree ture.
Tapha deebii Lesoottootti taphateen ammoo tokko walqixa ta'uun xumuran.
Seera dirree ofiitiin ala goolii lakkoofsisuu jedhuun Itoophiyaan gara marsaa itti aanutti darbuudhaan ramaddii garee itti aanu keessa galuu ishee mirkaneffatte.
Leenjisaan garee biyyaalessaa Itoophiyaa Obbo Abirhaam Mabiraatuu, sadarkaa gareen biyyaalessaa keenya irra jiruufi garee nu waliin dorgomuuf jiru yeroon ilaalu biyyoonni xiqqoo akka kanaa ciccimoo hin taane osoo nu waliin ramadamaniiru ta'ee jedheen yaade jedha.
''Biyyoonni kanaan dura yeroo hedduu Waancaa Addunyaatiif darbuun seenaa gaarii qaban osoo nu waliin hin ramadamne ta'e jettee yaada.
Haata'u malee, ramaddii kun osoo namni harkaan bira hin ga'iin carraadhaan waan ba'uuf kan dhufe fudhachuun of qopheessuu qofaadha," jedha.
Biyyoota kubbaa miilaan Afrikaa keessaa Waancaa Addunyaa keessatti hirmaachuun muuxannoo qaban waliin Itoophiyaan ni ramadamti jedhanii akka yaadanii hin turre kan himu leenjisaan kun, waan gaaris ta'e waan gadheef qophaa'anii akka ture dubbata.
Baamlaak Tasammaa Wayyeessaafi Waancaa Afrikaa
Dorgommiin Waancaa Afriikaa kan 2021 ji'a Amajjii keessa geeggeffama
"Waancaa Addunyaa irratti irra deddeebin kan hirmaatte Gaanaafi Waancaa Addunyaa qopheessuunillee muuxannoo kan qabdu Afrikaa Kibbaa waliin ramadamuun keenya tapha jiru xiqqoo kan qormaata qabaatu taasisuu mala.
Sanas ta'u garuu hanga dorgommii sana keessa seenneetti bu'aa gaarii galmeessisuun garee keenya keessaa tokkoffaa ta'uun darbuuf qophii gareen kun barbaadu taasisuun nurra jira jedheen amana."
"Erga ramaddiin kun ifa ta'een booda miidiyaaleen gara garaa akka carraa hin qabneefi garee ciccimoo keessa akka galle gabaasaa turan. Ani garuu akkasitti hin yaadu.
Garee kamiyyu sodaachuu hin qabnu. Sodaannaan itti seenuu dhiisuu wayya. Kana waan ta'eef hamilee guutuudhaan dorgommichatti seenuu qabna."
Leenjisaan kun itti dabaluun, "Calallii Waancaa Afirkaa irratti Kootidivaariin isteediyoomii Baahir Daaritti mo'achuun keenya garee cimaa ta'e akkasii dura dhaabbachuu akka dandenyu agarsiiftuudha. Kana akka hamileetti gargaaramuudhaan miira ni danda'amaatiin itti seenuun nurra jira," jedhaniiru.
"Dabalataan ammoo biyyoota kunneen mo'achuun gara marsaa itti aanutti darbuudhaaf qophii foyyaa'aa taasisuun nurra jiraata. Kanaaf ammoo qaamoleen dhimmi ilaallatu martinuu birmachuu barbaachisa. Qophiifi wanta ittiin humna keenya of ilaallu taasisuun nurra jiraata."
Garee biyaalessaa Itoophiyaa waliin waggoota kudhaniif kan taphate Adaanee Girmaa, "ramaddicha yeroo ilaalan cimaa fakkaata. Sadarkaan dandeetti kubbaa miillaa keenya kan akka Gaanaafi Afrikaa Kibbaa waliin wal hin gitu."
Ta'us garuu kibbaan miillaa haala guyya taphaa irratti waan hundaa'udha jedha Adaaneen. "Golii jalqabaa galchuun nutti cimuu dada'a. Yoo rakkoo kana furreefi waliin hojechuu dandeenyee garuu hedduu cimaa hin ta'u jedheen amana.
Yeroo yerootti gareen geggedaramaa jira kan jedhu Adaaneen,"Leenjisaa Abrahamiin nan jaalladha nan kabaja Gorsi ani isaaf kennu yoo jiraate gartuun kun sirriitti akka wal simuuf taphatoottaaf yeroo akka kennudha."
Obbo Isaayyaas Jiraa pirezidantii Itti - aanaa CECAFA ta'an
18 Muddee 2019
Waancaa Afrikaa: Tapha walakkaa-xumuraa Waancaa kanarraa maal maal eegna?
14 Adooleessa 2019
Waancaa Afrikaa: Dorgommiin waancaa kubbaa miilaa biyyoota Afriikaa kan bara 2021 ji'a Amajjii keessa geeggeffama
Waancaa Afrikaa 2019: Simannaa ho'aa garee kubbaa miilaa Aljeeriyaaf taasifame
Gareen kubbaa miilaa Masrii taphataa ganna 75 mallatteessise
Viidiyoo Murtessituu kubbaa miilaa jalqabaa Eertiraa
Waa'ee Usmaayyoo Muusaa wantoota isin hin beekne jaha
Barattoonni Chaayinaatti baratan yaaddoo keessa jiraachuu MM Abiyitti iyyatan
'Naannoo Somaalee iddoo boba'aan ba'utti dhibeen fayyaa hin beekamne mudachaa jira'
Aruuzticha Boongaa guyyaa cidhaa mana aruuztittii wallaale
'Gadameessa koo akka baasan waggoota 11'f hin barreen ture'
Hiriirtonni Ameerikaan marii dhimma Abbayaa keessa harka akka fudhattuuf gaafatan
Gaambeellaatti waldhabdeen namoota 12 galaafate 'furamaa jira'
Masaraa Abbaa Jifaar waggaa 140 booda haaromfamaa jiru suuraan
Naayijeeriyaatti namni Koroonaavaayirasiin qabame inni jalqabaa argame